Iindaba - Ziziphi izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwiifaucets zeplastiki
Zininzi izixhobo zompompo kwimarike. Ukongeza kwimibhobho yentsimbi eqhelekileyo,iipuphu zeplastikizikwasetyenziswa ngokubanzi. Ngoko ke ziziphi iingenelo kunye nokungeloncedo kwiifaucets zeplastiki? Indlela yokuthenga iifauce zeplastiki? Makhe sijonge:
Ziziphi iingenelo kunye nokungalunganga kwiifaucethi zeplastiki?
1. Ukumelana nobushushu obuphezulu kwaye bomelele
Iifaucethi zePlastiki zineempawu ezintle zeekhemikhali kunye neempawu zokugquma iiplastiki. Iitephu zePlastiki zinokumelana nobushushu obuphezulu kwaye akukho lula ukuzikrwempa. Ngokukodwa, uninzi lweempompo zeplastiki kwimarike zenziwe ngeplastiki ye-ABS. Iplastiki ye-ABS yimathiriyeli entsha engeyotyhefu kwaye ayinancasa, ineempawu ezibalaseleyo zekhemikhali kunye neempawu zokugquma umbane. Igxininisa kwiimpawu ezahlukeneyo ze-ps, san, kunye ne-bs. , Ineempawu ezibalaseleyo zoomatshini ezifana nokuqina, ukuqina kunye nokuqina.
2. Ukukhuselwa kwendalo kunye nempilo
Itephu yeplastiki inefuthe elincomekayo lokuchasa ukusebenza, uzinzo olululo lwangaphandle, akukho deformation, ubunzima obulula, akukho mdaka, akukho mhlwa, akukho vumba, ulwakhiwo oluphantsi, olulula, kwaye iyimveliso yetephu enobuhlobo nokusingqongileyo.
3. Ukumelana nokugqwesa okulungileyo
I-faucet yeplastiki inokuguquguquka kweplastiki ngexesha elifanayo, ukuguquguquka kuhle kakhulu, kwaye i-faucet yeplastiki ine-low water absorption, ukumelana nokugqwala okulungileyo kunye nokufakwa okulula.
Buthini ubungakanani bemibhobho yeplastiki yasekhaya
Iifaucethi zasekhaya ngokubanzi ngamanqaku ama-4, amanqaku ama-6 (ubungakanani be-intshi). Leyo yi-15 okanye i-20 (mm). Bonisa ububanzi bombhobho.
Ukuba umbhobho wakho wamanzi ubhalwe nge-Φ25 × 1/2, kuthetha ukuba i-diameter yayo yangaphandle i-25. I-diameter ye-nominal ehambelanayo yoqobo yi-DN20 (eyaziwa ngokuba ngamanqaku angama-6), ungathenga i-6 point faucet. Unokuthenga kwakhona i-4-point ye-plastiki faucet.
Ixesha lokuposa: Dec-13-2021